I-VirBELA: Inkomfa ebonakalayo kwi-3-Dimensions | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 10, 2020 NgoLwesithathu, Juni 10, 2020 UAndrew Angle
Intlanganiso ukude yaba yeyakho ubuqu eneqonga elibiziweyo I-VirBELA. Ngokungafaniyo neenkonzo zeenkomfa zevidiyo ezinje ngeXesha loBuso, Zoom, Messenger, Amaqela eMicrosoft, Google Meet, le yahlukile.
I-VirBELA ikubeka kwindawo enje ngomdlalo we-3-D kwikhampasi apho udibana khona ngokuhamba ujikeleza uncokola omnye nomnye, uncokola ngendlela efanayo naleyo ubuya kuba nayo xa benikunye kunye nomzimba kunakwilizwe elibonakalayo. Ngokungafaniyo nemidlalo ye-adventure okanye uBomi beSibini, ilizwe elibonakalayo elinikezelwa yiVirBELA linobuchwephesha kwezoshishino. Inika ikhampasi yokudibanisa ephezulu eneeofisi, amagumbi ebhodi, iiholo zenkomfa, iholo, kunye neziko lemiboniso-bhanyabhanya langoku elenzelwe iindawo zemiboniso.
Indawo yokuqokelela ye-3-D yayiqale yakhiwa yinkampani yokuthengisa izindlu nomhlaba Ixabiso le-eXp Njengendlela yokufumana ukhuphiswano ngaphezu kweembangi. Njengokuba ezinye iinkampani ezithengisa izindlu zithengiswa zizakhiwo ezibiza kakhulu ukubonelela abasebenzi kunye neearhente indawo yokusebenza kunye, i-eXp igcine imali eninzi ngokuphelisa isidingo seepropathi zorhwebo, ixesha lokuhamba, umzabalazo wezithuthi, kunye nezinye iindawo ezininzi ezinesitena nodaka.
IVirBELA yayiyitekhnoloji yenyani yokuphazamisa ishishini eliqhelene nokuphazamiseka kwetekhnoloji. Ukusebenza ngaphandle kwezakhiwo zokwenyani, i-eXp Realty ikhule ukusuka ekubeni sisiqalo ukuya kwiiarhente ezingaphezulu kwama-29,000. Ubukhulu becala, abasebenzi bayo, i-CEO, kunye neearhente bayakwazi ukusebenza ngokunceda ikhaya.
Imbuyekezo yokuba iinkampani ezithengisa izindlu nomhlaba zingazihlawula iiarhente zazo zihlawulwe ziindleko ezizinzileyo neziguqukayo zeshishini. Ukuxhobisa wonke umntu ukuba enze umsebenzi wakhe kwindawo yecampus ngaphandle kokushiya ikhaya engaphelelanga nje ekuchitheni iindleko zokunyusa ingeniso yearhente, yenze uqeqesho kunye nokusebenzisana kweqela ngcono kwaye ngokukhawuleza. Bafumana uqeqesho kwakamsinya kwaye banokufikelela okukhawulezileyo ngakumbi kwinkxaso yabasebenzi.
Nokuba kunenkomfa yevidiyo, ukusebenzisana njengeqela elikude kusenokubonakala ngathi kuyazahlula ekuhlaleni. Indawo eyi-3-D yeVirBELA iyanceda ukubaleka ukwahlulwa ekuhlaleni, iyenze ibonakale ngathi kukuhlala kwigumbi elinye, kwaye ayifuni i-VR yentloko. Usebenzisa iintolo kwikhibhodi yakho uhambahamba, udibana nabantu, uxhawule izandla, uncokole, uzulazule ikhampasi kunye, kwaye ude ubambe nomdaniso othile.
Phakathi kwenkangeleko yokudlala, eyona njongo isebenzayo yenye yemveliso ngonxibelelwano oluphuculweyo. Iiholo zenkomfa, amagumbi okufundela, amagumbi okufundela, kunye neeofisi zonke zinezikrini ezinkulu ezindongeni zokwabelana ngokuqulathwe kwiscreen sakho, naziphi na iwebhusayithi, iinkomfa zevidiyo, okanye ezinye iinkqubo zokusebenzisana kweqela. Oko uhlangabezana nako ngamanyathelo aliqela kufutshane nokudibana ubuso ngobuso.
Ngendlela owenza ngayo kwilizwe lokwenyani, abantu kwiVirBELA bayakwazi ukwakha ubudlelwane ngeentlobo zongqubano lwezentlalo onokuthi ubenalo kwiofisi yomdibaniso okanye ujikeleze kwiziko lendibano. Kufana nokuba umi ecaleni kwabanye, udibana ngokwamaqela. Njenge-avatar enesandi sendawo onokuhlala kuyo kwitafile yenkomfa umamele umntu ongasekunene kwindlebe yakho yasekunene, ekhohlo kwindlebe yakho yasekhohlo enomsindo we-3-D. Ujika intloko ujonge egumbini, uthethe omnye nomnye ngendlela onokuthi ngayo ukuba kufuneka urhwebe ngeemayile ezihamba rhoqo ukuze ube kunye.
Emva koku-odola Iqela leVirBELA Suite kwishishini lam, Douglas Karr wayengomnye wabantu bokuqala abeza engqondweni ukuyazisa. Kuba mna noDoug singabathengisi bedijithali eGreenwood sithetha ulwimi olufanayo lwesizukulwane esikhokelayo, kwaye ndiyazi ukuba naye ujongene nolawulo lweprojekthi yedijithali ebandakanya abathengi abakude kunye namaqela asasazeke ngokwendawo. Ukwabelana ngescreen kunye nee-webcams ngokuqinisekileyo zinendawo yazo kwiindlela zethu zonxibelelwano, nangona ngamanye amaxesha sikuphepha ukuveza ubuso bethu obungcolileyo kwikhamera. Ngaphandle kwekhamera okanye ngaphandle kwayo, oku kwenza ukuba ukwazi ukulinganisa ubukho ekuhlaleni kwigumbi elinye kunye.
Xa ufuna ividiyo ukongeza amagama akho kunye nembonakalo yobuso, iVirBELA iyayenza. Unokuthi uninzi lwezinto ezinokwenziwa yi-Zoom, i-VirBELA iyenza, nayo. Amava okungena kwigumbi kunye nokuncokola nabanye abantu kwelo gumbi lelinye lawona manxalenye asemagqabini amava eVirBELA kwezentlalo ebengekho kwezinye iimveliso. Inokuba yinto ehambelanayo, kodwa kwiiveki ezimbalwa emva kokuba ndiqaphele umntu onaye Facebook kwigama labo le-avatar elibhadulayo kwikhampasi yoluntu kaVirBELA, uZuckerberg wabhengeza ukuba igama lenkqubo yabo entsha yenkomfa yayi AMAGUMBI EMYALELO.
Ngelixa iVirBELA ineeofisi zomntu omnye, iindawo ezinkulu ziyamangalisa. Ngoku ineHolo enkulu ye-Expo eyakhiwe ngeendawo zorhwebo, iindawo zokuphumla zabucala, nokunye okuninzi.
Eyona ndlela yokuqonda ukuba yintoni iVirBELA kwaye inokukwenzela yona yizame for ngokwakho. Phakathi kwesiseko sabathengi bonke ubungakanani bemibutho kubandakanya iiyunivesithi eziphambili, iiFortune 500's, iiarhente zeNtengiso zeMama kunye nePop, amaziko enkonzo ekude abathengi, iinkampani ezininzi zoqeqesho (kuba ikwanamagumbi okufundela), kunye neeofisi ezisebenzayo / ekwabelwana ngazo. Nokuba yiVirBELA okanye elinye iqonga lemveliso ekusafuneka likhutshiwe, ndiqinisekile ukuba indawo ebonakalayo eyi-3-D sisalathiso esiya kwinkomfa ekude.
Inkqubo yokudityaniswa kweVirBELA ivumela abanini beQela Suite ukuba bafumane iikhomishini kwintengiso entsha kwaye babonelele ngesigqebhezana sokuphungula inyanga yokuqala. Ukuba ungathanda jonga iVirBELA, zazise kwaye singadibana phantse kumntu kwi-campus.
Qalisa kwi-VirBELA yasimahla
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa indawo yam yokudibanisa I-VirBELA
tags: 3 ubukhulu3dukuthengisa umcimbiamava adlalwayoimmersivevirbelaingqungquthela
UAndrew Angle ngumseki we AbaNxibelelanisi beNetGain, Inc. kwaye ungene emanzini kwintengiso yedijithali kuba iwebhu yayintsha. Ngemvelaphi yokuthengisa, wakha kwaye wagcina iiwebhusayithi kumashishini amaninzi kubandakanya ezingenzi nzuzo, ukuphatha izinto, ukuthengisa izindlu nomhlaba, ukhathalelo lwempilo, ukugaywa kwe-IT, urhwebo nge-e, urhwebo lokuhamba, kunye nezixhobo zabathengi. Uluhlu lweeprojekthi zentengiso yedijithali zandisa amaqela ophuhliso kumazwe ali-15. Imantra yakhe ithi, "Kwi-Intanethi, iJografi ayisebenzi."
Ungqamanisa njani iiKhalenda zikaGoogle ezi-2